Soomaalida Laga Tarxiilay Boqortooyada Sacuudiga Oo Gaaray 10 Kun – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Dadka Soomaalida ee dhawaanahan laga tarxiilayey dalka Sacuudiga ayaa la sheegay iney gaareen ilaa 10 kun oo ruux oo isugu jira rag, dumar iyo caruur.
Dadkan oo u badan dhalinyaro ayaa waxaa laga soo dajiyay garoonka diyaaradaha ee Adan Cade ee magaalada Muqdisho.
Qaar ka mid ah dadkaas oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaallad aad u adag ay ku heesatay muddadii ay ku jireen xabsiyada dalka Sacuudiga.
Waxaa kaloo ay sheegeen in la soo qabtay iyagoo ku jiray shaqo ama socday waddo, oo wixii hantiyo dhar ay lahaayeen laga soo tagay, qaar kood ayaa sheegay in la garaacay markii la soo qabanayay.
Qaar ka mid ah daka tarxiilka lgu geeyey Soomaaliya ayaa isu dhiibay laamaha qaabilsan tarxiilka kadib markii ay waayeen meel ay ka shaqeeyaan, iyadoo shirkadaha shaqada bixiya dowladda Sacuudigu ku cadaadisay ineysan shaqo siin dadka aan heysan sharciga.
Dumarka oo sita carruur ayaa iyana sheegay in si xun loola dhaqmay intii ay ku jireen xabsiyada, oo xanuuno kala duwan ay ku dhaceen sidda ay sheegeen.
Taliyaha Waaxda Socdaalka iyo jinsiyadaha Dowladda Soomaaliya Jeneraal C/llaahi Gaafow Maxamuud, oo la hadlay warbaahinta ayaa isna sheegay in qaar ka mid dadka laga soo tarxiilay Sacuudiga ay ku jiraan ajaaniib ka soo jeeda Ethiopia iyo Eritrean.
Dowladda Sacuudiga ayaa dhowr bilood wadda tarxiilka ajaanibta aan dalkeeda ku joogin iqaamada (Sharciga), waxaaana dalkaas laga tarxiilaay kumanaan ajaanib ah oo u kala dhashay dalal u badan Aasiya iyo Afrika.